Nyaatanii Buluu moo Dimookiraasii?
Sanbata Diqqaa, Guraandhalaa 13, 2016 Local time: 11:45
Guutummaa Addunyaa irratti uummatni beela’ee garaa duwwaa ciisu Miliyoona dhibba lama. Namoota akkanaa nyaataan of dandeessisuun karaa danada’amu irratti, hoogganoonni Addunyaa Kora G-8f, dhuma torban dabree as Waashingtonitti walga’an, mari’ataa turan.
Keessumaa lammiwwan Afrikaa nyaataan akka of danda’an oomisha qonnaa ol kaasuu - yada jedhu irratti walii-galan hirmaattonni kora kanaa. Kanneen kroa biyyoota Addunyaa duureyyii - G8 jedhamuu kanatti afeeraman, Muummicha Ministaraa Itiyoophiyaa, Melles Zeenaawii dabalee hoogganoonni biyyoota Afrikaa afurii waa’ee imammatoota qonnaa biyya biyya isaanii keessatti jijjiirama fidanii fi rakkoolee wabii nyaaataa isaan mudatan irratti ibsa kennanii jiran.
Dhimmi ilaalchi guddaan itti kenname tokko qooda hojiin dhuunfaa qabaatu. Hariiroo fi wal-gargaarsi Mootummaa fi dhaabbatoota daldala dhuunfaa gidduu jiru, wabii nyaataa Afrikaa keessaa mirkaneessuuf akka ijoo tahetti fudhatame. Dhaabbatoota dhuunfaa wajjiin wal-gargaaruun daldalaa fi qonnaa walitti hidhuun barbaachisaa tahuu hubachiisan, Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, Melles Zeenaawii.
Walitti-hidhachuun yokaan wal-gargaaruun hojjechuun faayida-qabeessa tahuu Ministarittiin Dhimma-alaa Yunaayitid Isteets, Hilarii Kilinton illee dubbatanii jiran. Tahus, wanna jabeessanii aeekkkachiisan qaban. Kaampaaniileen alaa lafa kireeffatanii qonnaatti bobba’uunis tahe kanneen mi’awwan qonnaa gargaaran lammiwwan biyyaa qabatanii malee qabeenyaa lammiwwan biyyaa fudhatanii tahuu hin qabu. Toorri daldala dhuunfaa, hojii fi jireenya qonnaan-bultoota qabiyyee xiqqoo qabanii fooyyessee, martinuu akka faayidaa argatu gochuu qaba. Yoo qonnaan-bultoonni oomishan daldallis ni dadammaqa, jedhan.
Most ViewedHiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa GujiiHiriirawwan Har’aa Oromiyaa Keessaa fi Tarkaanfii Humnoonni Mootummaa Fudhatan, JedhameAngawoonni magaalaa Adaree fi kan Bulee Horaa maal jedhu? Walisoon maal keessa turte?Hiriira Godina Gujii fi Arsii Lixaa Akkasumas Dhohiinsa Bombii Magaalaa WalisooHiriirri Mormiis, Hiraarsaa fi Reebichi Humnoota Mootummaas Oromiyaa Keessatti Itti Fufuu Dubbatu, Jiraattonni Most Listened Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Guutummaa gabaasaa kanaa dhaggeeffadhaa Gabaasni sagalee kunooti